B boy in English with contextual examples - MyMemory
Results forbboy translation from Burmese to English
B I [I...]
%A %B %Id %Y
%A %B %d %Y
%A, %e %B %Y %X
\_t%s -B လမ်းကြောင်းအမည်...
\_t%s -B pathname...
\_t%s -b acl dacl လမ်းကြောင်းအမည်...
\_t%s -b acl dacl pathname...
b'ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်များသည် နို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့် ငှက်များတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားစေသော ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အုပ်စုဖြစ်ပါသည်။
b'Coronaviruses areagroup of related viruses that cause diseases in mammals and birds.
b'COVID-19 စောင့်ကြည့်ခြင်းတွင် ရောဂါတိုးပွားမှုပုံစံများကိုဖွဲ့စည်းရန်အလို့ငှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပျံ့ပွားမှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း ပါဝင်ပါသည်။
b'COVID-19 surveillance involves monitoring the spread of the coronavirus disease in order to establish the patterns of disease progression.
&quot;b'COVID-19 အက်ပ်များသည် 2019-20 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် ထိတွေ့မှု ခြေရာခံခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ- ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူများနှင့် ထိတွေ့ခဲ့သူများ(&quot;&quot;ထိတွေ့မှုများ&quot;&quot;) ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် မိုဘိုင်း ဆော့ဖ်ဝဲ အက်ပလီကေးရှင်းများ ဖြစ်သည်။&quot;
&quot;b'COVID-19 apps are mobile software applications designed to aid contact tracing in response to the 2019-20 coronavirus pandemic, i.e. the process of identifying persons (&quot;&quot;contacts&quot;&quot;) who may have been in contact with an infected individual.&quot;
CD4 + T ဆဲလ်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်သည့် ပဋိဇီဝ ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် B ဆဲလ်များကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး CD8 + T ဆဲလ်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသည့် ဆဲလ်များကို တိုက်ရိုက် သတ်ပစ်ပါသည်။
CD4+ T cells stimulate B cells to produce virus-specific antibodies, and CD8+ T cells directly kill virus-infected cells.
b'A COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသည် 2019 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ (COVID-19) အတွက် အသုံးပြုနိုင်ဖွယ်ရှိသော ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
b'A COVID-19 vaccine isahypothetical vaccine against coronavirus disease 2019 (COVID-19).
b'Angiotensin-ပြောင်းလဲခြင်း အင်ဇိုင်း2 (ACE2) သည် အဆုတ်များ၊ သွေးလွှတ်ကြောများ၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်နှင့် အူများရှိ ဆဲလ်များ၏ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်(ဆဲလ် အမြှေးပါးများ) တွင် ကပ်တွယ်နေသည့် အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
b'Angiotensin-converting enzyme2(ACE2) is an enzyme attached to the outer surface (cell membranes) of cells in the lungs, arteries, heart, kidney, and intestines.
b'COVID-19 ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သည့် ကာကွယ်ဆေး သို့မဟုတ် 2019-20 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ (COVID-19) ဆိုးကို သက်သာစေမည့် ရောဂါကုသမှုဆေးညွှန်းကို ဖော်ထုတ်သော သုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
b'COVID-19 drug development is the research process to developapreventative vaccine or therapeutic prescription drug that would alleviate the severity of 2019-20 coronavirus disease (COVID-19).
desi, moti bhabhi ki cudai (Hindi>English)¿es guapo el tío de andrés? (Spanish>English)pai rawe (Maori>English)petunjuk baru (English>Malay)dhl (Dutch>French)ponolohiya (Tagalog>English)虽然品牌号称排名第六 (Chinese (Simplified)>Vietnamese)lokal bf (Norwegian>English)the same place i am at (English>Tagalog)hepialus (Latin>English)rauchen ist todlich (German>English)tatte bhoond de (Panjabi>English)bagay (Tagalog>Malay)ætioperne (Danish>Korean)x bf bengali video (Bengali>English)ano ang perspektiba (Tagalog>English)mi día fue aburrido (Spanish>English)no regrets (English>Italian)yeh mera number hai save kar lena (Hindi>English)kantang pambata (Tagalog>English)ibubapa (Malay>English)guaribile (Italian>German)pwede ba ko makahiram ng pera sayo (Tagalog>English)berekeningen (Dutch>Swedish)bf फिल्म हिंदी मेंb(Hindi>English)